प्रतिकलाई आँखा दिन आर्थिक सहयोग
दमौली । जन्मँदै तीन सदस्यले आँखा गुमाएका तनहुँ घिरिङ गाउँ पालिका वडा नं. १ अत्रौली निवासी पोख्रेल परिवारका कान्छा सदस्य आठ वर्षिय प्रतीकको आँखा प्रत्यारोपणका लागि सुभेच्छुकहरुले आर्थिक सहयोग गर्ने लहर चलेको छ ।
व्यास ४ स्थित वेदव्यास प्राविमा अध्ययनपश्चात हाल राजधानीको ललितपुर लगनखेल स्थित नमूना मच्छिन्द्रा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका पोख्रेललाई आँखा दान गर्न सक्ने चिकित्सकले बताए पछि परिवारले सुभेच्छुकसँग आर्थिक सहायता मागेको थियो । सानै उमेरमा शल्यक्रिया गर्न सकिए ज्योति दिन सकिने चिकित्सकको निष्कर्षपछि परिवारलाई सुभेच्छुकले आर्थिक सहायता दिएका हुन् । हाल भारतको सरकारी एम्स अस्पतालमा उनको आँखा प्रत्यारोपण प्रक्रिया शुरु हुन लागेको छ । परिवारका अनुसार आँखा प्रत्यारोपणका लागि आफन्त र सुभेच्छुकले देश तथा विदेशबाट सहयोग गरेका छन् ।
हाल डेनमार्कमा रहेका अनिल वस्ताकोटी दम्पत्तीले पाँच हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको प्रतिकका पिता कमलचन्द्र पोख्रेलले बताए । त्यसैगरी हाल काठमाण्डौमा रहेका प्रकाश अधिकारीले पनि पाँच हजार प्रतिककी आमालाई हस्तान्तरण गरेको आमा ताराकुमारी पोख्रेलले बताईन् ।
यस अघि हाल युुकेमा रहेका मुक्तिनारायण श्रेष्ठले दश हजार, लायन्स क्लब अफ व्यास सीटिले १५ हजार, वेदव्यास टोल विकास संस्थाले १३ हजार चार सय भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई सकेका छन् ।
उनी पहिले अध्ययन गरेको वेदव्यास प्रा.वि.का शिक्षक स्टाफबाट आठ हजार, विरालेटार टोलविकास संस्थाका तर्फबाट करिब आठ हजार उपलब्ध गराई सकेका छन् । व्यास नगरपालिका वडा नं. ४ ले चेक मार्फत १५ हजार, इनरह्वील क्लब अफ दमौलीले आठ हजार पाँच सय भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरिसकेका छन् । आमा ताराकुमारीले एम्समा भर्ना गरेर उपचारको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिइन ।
प्रतिकका पिता कमलचन्द र दिदी प्रमिलासमेत दृष्टिविहिन
छन् । आमा ताराकुमारी पोख्रेलको पनि एक आँखाको ज्योति बाल्यकालमै गुमेको थियो । प्रतिक र प्रमिला व्यास–४ स्थित वेदव्यास प्रा.वि.को अध्ययन पछि हाल ललितपुर लगनखेल स्थित नमूना मच्छिन्द्रा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।